कोरोना भ्याक्सिन अपडेट : भ्याक्सिनको दौडमा को छ अगाडि, थाहा पाउनुहोस पुरा जानकारी -कोरोना भ्याक्सिन अपडेट : भ्याक्सिनको दौडमा को छ अगाडि, थाहा पाउनुहोस पुरा जानकारी -
कोरोना भ्याक्सिन अपडेट : भ्याक्सिनको दौडमा को छ अगाडि, थाहा पाउनुहोस पुरा जानकारी
११ असार २०७७, बिहीबार २०:१४ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको प्रकोप देश र विश्वमा बढ्दैछ। भाइरस रोकथाम गर्न धेरै देशहरूमा खोप तयार गर्न अनुसन्धान भइरहेको छ। जुन २२ मा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोविड १९ भ्याक्सिनको मस्यौदा जारी गर्‍यो र भन्यो कि कोरोना भाइरसका लागि १३ वटा खोप क्लिनिकल मूल्यांकनको चरणमा छ।
आज हामी तपाईलाई बताउनेछौं कि कसले देश र विश्वमा कोरोना खोप बनाउने दौडमा पुगेको छ? कोरोनाबाट बच्न विभिन्न उपायहरू चालिएका छन्। तर यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न खोपको गठन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धेरै देशहरू यसको खोपको प्रतिक्षामा छन्।
विश्वमा धेरै ठाउँमा कोरोना खोप उत्पादन गर्न अनुसन्धान भइरहेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै समयदेखि मानवहरूमा खोपको परीक्षण सुरु गरे।
ईम्पीरियल कलेज अफ लन्डन खोपको परीक्षण मानिसमा चाँडै सुरु हुनेवाला छ।
विश्वमा १२९ खोप उम्मेद्वारहरू छन्, जुन हालपूर्व क्लिनिकल मूल्यांकनमा छन्।
एउटा रिपोर्टका अनुसार खोप तयार पार्न प्राय: धेरै वर्ष लाग्छ। विज्ञान पत्रिका PLOS One मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, खोप उम्मेदवारहरूको सफलता दर मात्र 6% छ। वर्तमानमा, कोरोनाको बढ्दो घटनाहरूका कारण, विश्वका अनुसन्धानकर्ताहरू यसको खोप तयार पार्न युद्धको खोजीमा छन्।
हालसम्म विश्वमा कोरोना भाइरसको कारण चार लाख भन्दा बढी मानिस मरेका छन्। हामी तपाईंलाई आज नै बताउँछौं, कोरोना खोप बनाउन विश्वमा कहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ ?
अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेका पीएलसी विश्वविद्यालयले उत्पादन भ्याक्सिन क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ChAdOx1 nCov-19 खोप अहिलेसम्म दश हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई दिइयो। अन्तिम चरणमा पुग्न यो विश्वको पहिलो खोप हो।
यस खोपको परीक्षण विश्वका धेरै देशहरूमा भइरहेको छ। भारतको सीरम संस्थानले भारतको खोप विकास गर्न १०० मिलियन डलर लगानी गरेको छ।
यो खोप ChAdOx1 भाइरसबाट तयार भइरहेको छ जुन सामान्य चिसो भाइरसको रूप हो।
अन्वेषकहरूले भने कि यो परीक्षण सफल भएमा यस खोप यस बर्षको अन्त्यसम्म सुरू गरिनेछ।
बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र चीनमा क्यानन बायोलोजिकल इंक द्वारा बनाएको भ्याक्सिन क्लिनिकल मूल्यांकनको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। अन्वेषकहरूले भने कि यो खोपको नियामक स्थिति चरण १ मा छ।
बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र क्यान्सिनो बायोलोजिकल इंक द्वारा निर्मित यो खोप गैर-प्रतिकृति भाइरल भेक्टर प्लेटफर्ममा काम गर्दछ।
अमेरिकामा, एलर्जी र संक्रामक रोगहरूको राष्ट्रिय संस्थान र Moderna Inc खोप बनाउन सँगै काम गरिरहेका छन। यो खोप परीक्षणको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। अन्वेषकहरूले भने कि यसको नियामक स्थिति चरण १ मा छ।
अमेरिकामा एलर्जी र संक्रामक रोगहरू र Moderna इंक राष्ट्रिय संस्थान द्वारा निर्मित खोप LNP N क्याप्सुलेटेड mRNA मा आधारित छ।
कोरोना भाइरस चीनको यस शहरमा सुरु भयो। खोप बनाउने काम पनि यस शहरमा भइरहेको छ। यहाँ तयार भ्याक्सिन हाल चरण १/२ हो। विश्वका धेरै खोपहरू यस चरणमा छन्। जस्तै …
बीजिंग जैविक उत्पादन को संस्थान / साइनोफर्म
बायोएनटेक/फोसन फार्मा/फिजर प्लैटफॉर्म आरएनए
लन्डनमा इम्पीरियल कलेजले भ्याक्सिन परीक्षणको चरण १ तैयार गर्दैछ। यो खोप आरएनए मा आधारित छ।
Curevac खोप परीक्षणको पहिलो चरणमा। यो खोप mRNA मा आधारित छ।
गेमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट
चिनियाँ चिकित्सा विज्ञान एकेडेमी
स्रोत : अमर उज्वाला